EA044 - Olar Personal Mkpu Obere Na-agbakasị 120-130dB Mkpu Nchedo Nchechainị Keychain na LED | Ngwọta OMG
EA044 - OMG Personal Mkpu Obere mkpu 120-130dB Def Defense Keychain Security Mkpu na LED
Mkpuchi Igodo Mkpuchi: Mgbasa ozi onwe onye na-enyere aka ịma jijiji ma gbochie onye na-awakpo ya ma dọba uche na oge mkpa, dịka nchekwa. Ọ bụkwa ezigbo ngwaọrụ maka onye na-abịa ahịa nke nọ n'ọnọdụ dị ize ndụ.
Ọ dị mma ka ụda dị mma: Ala elu 120-130dB Oti mkpu nwere ike ịdọta ndị gbara ya gburugburu maka enyemaka.
Ike na-esi ike: ọ bụ ihe eji eme ihe banyere gburugburu ebe obibi, mara mma ma dịgidere. Nchedo nchedo na-enye ìhè ọkụ ọkụ maka ìhè abalị.
Mfe iji: Naanị wepụ plọg mgbe ọ bụla ọnọdụ mberede dị egwu, ọ ga-amalite mkpu. Fanye nkwụnye iji kwụsị mkpuchi ..
egosipụta ọtụtụ ihe: Mgbasa Ozi onwe onye n'ọtụtụ ebe eji maka ụmụ akwụkwọ, ndị agadi, ụmụaka, ndị inyom, ndị ọrụ abalị na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ngwá ọrụ bara uru maka njem, ịgagharị, ịgba ụlọikwuu na nkịta na-eje ije, maka iji ehihie na abalị.
AKWỤKWỌ: 120-130dB (Dị)
Batrị: 3 * LR44 1.5V (Gụnyere)
Nkebi Nkebi: 70 * 46.5 * 21.5mm
Akara Nkebi: 30.6g
Nzuzo 829 6 Echiche Taa
EA030 OMG Nchebe onwe Push-Button Keychain Mkpu,…
EA028 - OMG 130dB Oti mkpu nkeonwe - Esemokwu ọkụ -…
Mkpesa Ndị Ujọ ikuku na ikuku na LOUD 120 dB Siren…